Guuxa Dhallinyarada Puntland Lama Dhayalsan Karo! (Maqaal) – Radio Daljir
Guuxa Dhallinyarada Puntland Lama Dhayalsan Karo! (Maqaal)
Maajo 31, 2021 9:34 b 0
Dhallinyaro aad u tirobadan oo ku nool Puntland waxay is weydiinayaan waxa ka reebay inay wax doortaan ama la doorto.
Tan iyo markii la yagleelay Dowladda Fedaraalka Somaaliya 2004 laguna qaybsaday nadaamka 4.5 waxaa saldhig u noqotay hannaan wax ku qaybsi qabill. Maadaama qaab qabiil uu yahay habka wax lagu qeybsado, kuwa beesha dhexdeeda ku qada maxaa lagu tilmaami karaa?
Intii ay socdeen doodihii adkaa iyo is diidmadii adkayd ee ka dhalatay hannaanka doorashadda, waxay dhallinyaradu ku duceyn jireen in Eebbe is afgarad dhex dhigo madaxda.
Waxay si fiican 27.05.2021 u daawadeen xaflad ku saabsanayd heshiiska doorashada. Waxay durbadiiba arkeen olole oo billowday: dhalinyaro raadinaya ergo; kuwo doonaya inay xildhibaan noqdaan; odayaal aad mashquul ugu ah qoridda ergadda soo saaraysa Xildhibaanadda mustaqbalka meteli doona ummadda heer federaal iyo odayaashoodii oo guryaha iyo maqaaxiyaha iska fadhiya oo aan wax doora ku lahayn.
Waxay dareemeen inaysan mustaqbalkooda nadaamka dowladeed aynan talo iyo tamartoona ku biirin karin aa yahooda siyaasadeed iyagoo is weydiyay:
1. Miyaysan ummadu wadaagin ka wadatashiga soo xulista ergada?
2. Miyuusan maamulku ku baraarugsanayn xaaladdan kala fogeynaysa dadka?
3. Beelahaas isku gooni yeelay soo xulista ergada iyo xildhibaannada miyaysan lahayn garasho ah in lala wadaago kuraastan 17 Sano ay ku fadhiyaan?
4. Ma nafteenna baynu gabnay ma odayaasheennaa ina gabay mise waa layna dhacay oo la inoo xoog sheegtay?
5. Beesha caalamku dadka laga tira badan yahay waa u dooddaa; kuwa la dhacay maxay ugu doodi weysay?
*Inkastuu dhabcaal gudhan yahay oo dharabo kaa gooyo
Isagoo dharaar maqan kol uu dumar wax kuu dhiibo
Dhan aad uga dhacdaba maal ku xiga waad dhadhamisaaye
Waa dhaawac kugu yaal xigtada dhaqasho diiddaaye.*
Maadaama la xaddiday lana magacaabay beelaha leh xildhibaannada aqalka hoose horayna ay iyagu ku xuleen 51 ergay xildhibaankii hore, hadda madaama 50 lagu daray ergadii, waa inay ka qaybgeliyaan dadka ay deegaan la wadaagaan. Taasi waxay yarayn doontaa tabashooyinka dadka Ilaa hadda aan helin xaqooda ah in ergada wax xulaysa iyo xildhibaanno ku yeeshaan hannaanka doorashada dowladda Puntland maamulayso labadda aqalba.
WQ. Siyaad Cali Jaamac *
Maqaalo Kale 404 Wararka 24935
Ciidamadda dowladda oo howlgalo ka sameyeey gobalka shabeelaha dhexe